Vatashanyi vana veRussia Vakaurawa, 16 Vakakuvara MuTurkey Yekufambira Bhazi Njodzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Vatashanyi vana veRussia Vakaurawa, 16 Vakakuvara MuTurkey Yekufambira Bhazi Njodzi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Sekureva kwemushumo wemapurisa weTurkey, mutyairi webhasi nevashanyi veRussia makumi maviri nevaviri vaive mubhoti akatadza kudzora mota ndokupinda munzira inoenda uko bhazi rakapidiguka.
Vashanyi vanokuvara mukufashukira bhazi rakaparara muAntalya, Turkey.
Kune vanhu vakafa, gumi nevatanhatu vakakuvara, maererano nemishumo.
Paive nevashanyi veRussia makumi maviri nevaviri pabhazi rakadonha.
Bhazi rakatakura vashanyi vekunze rakapidiguka mudunhu reTurkey re Antalya.
Tsaona iyi yakaitika munzvimbo yeSide nemusi weMuvhuro manheru, Nyamavhuvhu 2 kuma6 manheru panguva yemuno, padyo neguta reManavgat. Bhazi rakanga rakatakura vashanyi veRussia kubva kumusha weKonakli kuenda Antalya Airport - vafambi vacho vaifanirwa kubhururuka vachidzokera kumba kuRussia na9: 50pm husiku ihwohwo.
Sekureva kwemushumo wemapurisa weTurkey, mutyairi webhazi akatadza kuzvidzora ndokupinda munzira yaiuya apo bhazi rakapidiguka.
Paive nevashanyi makumi maviri nevaviri veRussia mubhazi vaive vapedza zororo ravo muAntalya.
Vatakuri bhazi vana vakauraiwa mutsaona, vanosvika gumi nevatanhatu vakakuvara.
Sekureva kweRussia yekushanya opareta Intourist, rubatsiro rwese rwunodiwa rwakapihwa kune vakawirwa netsaona. Parizvino, vashanyi vese vari muzvipatara zvina mudunhu reAntalya. Ruzivo nezve mamiriro evaya vakaurayiwa rwuri kujekeswa. Mutyairi webhazi haana chaanoziva mune chakakomba mamiriro.
Iyi haisi tsaona yekutanga nevashanyi veRussia muTurkey mumwedzi ichangopfuura. Musi waApril 10 wegore rino, mukadzi weRussia akafa mutsaona yebhazi muAntalya, Turkey. Vashanyi veRussia 26 pavane 32 mubhazi vakakuvara mutsaona iyoyo.